Hadaladii Caan baxay ee laga dhaxlay boqorkii Feerka aduunka ee Geeriyoodey | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Hadaladii Caan baxay ee laga dhaxlay boqorkii Feerka aduunka ee Geeriyoodey
Hadaladii Caan baxay ee laga dhaxlay boqorkii Feerka aduunka ee Geeriyoodey
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 5-06-16 7:13 AM Cassius Clay waa magac addoonnimo. Anigu ma dooran, mana doonayo. Magaceygu waa Muxamed Cali, waxaan ahay nin xor ah. Waxaan rabaa in ay dadka magacaasi iigu yeeraan marka ay ila hadlayaan ama ay iga hadlayaan. “
“Uma socdo meel 10,000 oo mayl ka fog gurigeyga, si aan gacan uga geysto dilka iyo gubitaanka dal sabool ah, si ay gumeystayaasha caddaanka ah usii wadaan haysashada dadka madow ee caalamka.